Ahoana ny fihazonana ny bateria ao amin'ny iPhone 11, iPhone 8, SE ary ny hafa miaraka amin'ny iOS 14.5 | Vaovao IPhone
Ahoana ny fihazonany ny bateria ao amin'ny iPhone 11, iPhone 8, SE ary ny hafa miaraka amin'ny iOS 14.5
Matetika ny mahafantatra ny fanjifana bateria amin'ny fitaovantsika rehefa mahazo kinova vaovao izy ireo. Mitovy foana ny fanontaniana, ahoana no itananan'ny iPhone miaraka amin'ny iOS xx ny bateria? Toa hita fa ity kinova iOS 14.5 ity dia misy lafiny tsara amin'ny lafiny fiainana bateria amin'ny iPhones taloha.
Rehefa miresaka momba ireo iPhone tranainy isika dia midika hoe ny iPhone 11, ny iPhone 8 ary ny iPhone SE. Ny iPhone 12 amin'ny teôria hoe maoderina kokoa dia tsy tokony hanana olana amin'ny bateria, fa raha marina fa ireo maodely talohan'ireto iPhone 12 ireto dia niaritra fanjifana bateria kely taorian'ny nahatongavan'i iOS 14 Ho voavaha amin'ny alàlan'ny iOS 14.5 vaovao ve ny olan'ny fanjifana bateria avo?
Ny fahatongavan'i iOS 14.4 dia mamaha olana sasany amin'ny fizakan-tenan'ireo fitaovana ireo saingy toa nihatsara kokoa ity faharetana ity. Farafaharatsiny mba aseho amin'ny horonantsary noforonin'i iAppleBytes, izay anaovana izany Mampitahain'izy ireo ny fanjifana bateria an'ny iPhone SE, 6S, 7, 8, XR, 11 ary SE 2020 miaraka amin'ny kinova RC izay farany.
Amin'ity tranga ity ny iPhone 11 nahatratra fe-potoana 5 ora sy 54 minitra niaraka tamin'ny iOS 14.5 napetraka, raha ny fitsapana mitovy amin'ny iOS 14.4 kosa dia naharitra 5 ora 33 minitra ny bateria. Fa ho an'ny maharatsy iPhone XR naharitra adiny 5 sy 10 minitra tao amin'ny iOS 14.5 raha oharina amin'ireo ora 5 sy 28 minitra azony tamin'ny iOS 14.4.
Tsara kokoa ny mijery ny horonan-tsary manontolo ary manamarina ny fizakan-tena amin'ny maodely sisa fa toa tsy ny rehetra no faly tamin'ny fahatongavan'i iOS 14.5, satria nitranga tamin'ny fotoana namoahana azy tamin'ny iOS 14. Ny maodely sasany dia toa very ny fahaleovan-tena sasany raha oharina amin'ireo kinova taloha, saingy tsy dia be loatra, koa manantena isika fa ny Apple dia mahavita manitsy an'io fizakantena io amin'ny avo indrindra ao amin'ny iPhone.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 14 » Ahoana ny fihazonany ny bateria ao amin'ny iPhone 11, iPhone 8, SE ary ny hafa miaraka amin'ny iOS 14.5
Nanazava i Apple fa maninona ny mpampiasa sasany no tsy afaka mamily ny fanakanana ny fanarahan-dia ny app